Pep Guardiola oo ku soo biiray tababarayaasha ugu muruqa wayn Champions League…(Aqri liiska 200-leyda) – Gool FM
Pep Guardiola oo ku soo biiray tababarayaasha ugu muruqa wayn Champions League…(Aqri liiska 200-leyda)
Byare April 6, 2016
(Munich) 06 Maarso 2016. Tababaraha soo socda ee Man City Pep Guardiola ayaa gaaray meel sare sideed sano uu hogaaminayay kooxaha quwada wayn ee Barcelona iyo Bayern Munich kaddib goolkii xalay ay kooxdiisa Bayern Munich kaga adkaatay Benfica.
Guardiola ayaa noqday tababarihii 5-aad ee taariikhda Champions League ka dhaliya 200-gool.
Goolkii madiga uu xalay Vidal u dhaliyay kooxda reer Germany ayaa u horseeday inuu macallinka reer Spain baal dahabi ah ka galo tartanka ugu xiisaha badan ee Yurub.
Macallinkii hore ee Man United Sir Alex Ferguson ayaa ah tababaraha ugu goolasha badan CL 320 gool, waxaa soo xiga Arsene Wenger (270), Carlo Ancelotti (241) iyo Jose Mourinho 234, waxaana xalay liiska waa waynka ku soo biiray Guardiola oo la yimid 200-gool.
DAAWO: Min Carlitos, Kolarov ilaa Kariim Benzema & 10-kii gool ee todobaadan ugu fiicnaa adduunka
''Sideen caawa gabadheeyda ugu sheegaa inaan aabeheed iman doonin si uu...''